site Karina Santos 17/05/2019
Gọọmenti rụrụ nwere a ọjọọ RAP n'ihi ịbụ unyi, inyoghi inyoghi, na stinky. Ma ị maara na hotels ugbu a kwalite? N'ihi na ndị na-amaghị ihe na gọọmenti rụrụ na-, anyị mere abụghị naanị misspell hotel na-agba ọsọ na ya. Gọọmenti rụrụ dị ọnụ ala ụlọ ga-enyere gị gbatịa njem gị mmefu ego.
Gọọmenti rụrụ pụrụ ịbụ ndị frills na hotels enye. N'ihi ya, e nwere ike inwe dịghị kọfị igwe n'ime gị ụlọ, dịghị free ncha ma ọ bụ gị onwe gị na friji. Ị ga-ọbụna na-na-free akwa nhicha. Ma ụfọdụ gọọmenti rụrụ n'ezie ere ncha na ndị ọzọ dị mkpa na a ọnụ ala price. na n'aka, eleghị anya ị ga-enweghị gị onwe gị dresser ma ọ bụ kaboodu na-akọrọ ụlọ, ma ha na-eme nwere igbe ebe i nwere ike na-echekwa gị ihe. Ị nwere ike ime ka gị onwe gị na gbachiekwa ezie. Ọ bụrụ na gị na akpa bụ oke ibu na mgbe ọpụpụ, ị ka chọrọ na-eme ụfọdụ ikpeazụ-nkeji nlegharị anya, ị nwere ike ịhapụ gị akpa na ibu ụlọ ahịa.
Wezụga enwe a dị ọcha ebe na-ehi ụra na ala mkpuchi na-echekwa gị stof, ụfọdụ n'ime ndị a na ebe-enye ndị ọzọ eji enyere ndụ aka dị ka nke ọma. N'ebe ụfọdụ ga-enwe ihe dị ka ọdọ mmiri ohere, free nri ụtụtụ, free kọfị, obodo-eme. Ụfọdụ ọbụna nwere saunas na ịhịa aka n'ahụ mmiri na ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Na na na, n'aka, eleghị anya ị ga-esi otu nzuzo ị ga na a hotel. E nwere anyị na ebe dị ka ime ụlọ ịwụ, esi, ezumike ebe, na-arụ ọrụ ụgbọ. Otú ọ dị, nke a bụ ezi ụzọ izute ndị. Ọ bụrụ na ị kpọgidere ke anyị na ebe ị pụrụ izute ndị njem si n'ụwa nile. Na ọbụna na-amalite uru enyi gị na ndị ị na-ezute gị njem na nwere ọhụrụ n'ọdịnihu njem buddies, oke! Ndị mmadụ na-na-arụ ọrụ na gọọmenti rụrụ na-na-na na na awuasara ndị mmadụ, n'ihi ya, ọ dị mma ka mingle na-emekọ na ha, dị ka nke ọma.
Ụfọdụ gọọmenti rụrụ na-na obodo emmepe ma ọ bụ na ebe ndị ị ma ga-na-adịghị ọbụna na-achọpụta. Freehand Miami, a mbikọ na Florida, bụ nanị abụọ blocks n'ebe osimiri ma na-enye free kọfị nwere akpụrụ mmiri ka ya ọbịa. Na a Swiss spa mbikọ malitere site a nonprofit akpọ Hostelling International nwere ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ na anya nke Swiss Alps.
Ọ bụrụ na ị na-a mmefu ego njem, ọ bụ ukwuu kwesiri na ị ga-nnọọ mmasị anọ na a mbikọ. Ahịa nwere ike na-amalite site ka ala a ole na ole cents na $100 maka akọrọ ụlọ, dabere na nke akụkụ nke ụwa na ị na, ma, ọ bụ nnọọ obere maka ahịa na-aga elu karịa. Ọbụna mbikọ na anya nke ihe Alps aga n'ihi na gburugburu $64 kwa abalị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/enjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Train njem, Train njem Germany, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Jan 2020Feb 2020Mar 2020Apr 2020Ka 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020